့ ရွှေမွတ်စလင် တက်မထောင်နဲ့။ ဆက်လှော်။ Where? Forwards or backwards or sideways? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Time for Myanmar Buddhists to kick out 969 Ma Ba Tha leader Thidagu and Wirathu
ခေါင်းမြီးခြုံ လုံပါပေ့ »
့ ရွှေမွတ်စလင် တက်မထောင်နဲ့။ ဆက်လှော်။ Where? Forwards or backwards or sideways?
ဆက်လှော်။ Where? Forwards or backwards or sideways?
In Myanmar Muslim Boat race rowing team…there are5Managers: Council, Ulama, Tabalique etc. Rowing team members are also divided into different factions. NO ONE seems to agree to work together to win the race or to move forward. They could not accept the UNITY in DIVERSITY concept. No one is willing to stand behindasingle banner, single political party or to accept or to chooseagroup of leaders to lead them…So some are rowing the boat heading to Sitgaing but some left the boat team, mounted on the horses leading to Bago (Pegu)….
Above is my satire comment under my friend U Aung Tin’s post which I shared below.
မန္တလေးမှာ ဦးပုိုင် ဝမ်ပေါင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြနေကြလုို့ ငါတုို့လွတ်သွားပြီ မထင်နဲ့ ရွှေမွတ်စလင်
ဗိုလ်နေဝင်းခေတ်ကတည်းက ဖောင်ကြီးဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် ရုိုက်သွင်းထားတဲ့ မိစ္ဆာအယူအဆ နှစ်မျိုးဘဲရှိတယ်။
တစ်မျိုးက စစ်တပ်ကုို အာမခံနဲ့။
နောက်တစ်မျိုးက မွတ်စလင်တွေကုို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဖိနှိပ်ဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ သမ္မတကြီးကအစ၊ ဝန်ကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ တုိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူက အလယ်၊ တုိုင်း၊ ခရုိုင်၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ အဆုံး၊ အများတကာ့ အများစုကြီးဟာ ဖောင်ကြီးကျောင်းဆင်း၊ ဖောင်ကြီးမျိုးဆက်တွေချည်းဘဲ။
သူတို့တွေမှာ များသောအားဖြင့် သိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ မွတ်စလင်ကုို ကြောက်တဲ့၊ မုန်းတဲ့၊ နှိမ်လုိုတဲ့၊ စော်ကားလုိုတဲ့စိတ်တွ ရှိနေကြတုန်းဘဲ။
ဒါတင်မက ဗုိုလ်နေဝင်းလုပ်သမျှ အကောင်းမမြင်တဲ့ ထိပ်တန်း ဒီမိုခေါင်းဆောင်ဆုိုသူတွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေကတောင် မွတ်စလင်တွေကုို ဒုတိယတန်းစား နိုင်ငံသားဖြစ်အောင် တမင်ခွဲခြားဖိနှိပ်ထားတဲ့ ၁၉ ၈၂ နုိုင်ငံသားဥပဒေကျတော့ ပြည်သူတွေက ထောက်ခံထားတဲ့ဥပဒေ၊ ပြည်သူတွေက အတည်ပြုထားတဲ့ ဥပဒေဆုိုပြီး လုံးဝမပြင်ဖို့ စစ်ဗုိုလ်ဦးသိန်းစိန်ထက်တောင် သူတုို့က ပုိုပြင်းထန်နေကြတာကုို တွေ့တယ် မဟုတ်လား။
စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ပြည်သူရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေဆိုတာ ရှိရိုးလားဗျာ။
နောက်ကဘဲ ဦးဆောင်ကြတော့မှာလား ?
နယ်ပယ်စုံမှာ ပြသနာပေါင်းစုံတက်နေတယ်။ ကျောင်းသားတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ၊ တောင်သူလယ်သမားတွေ၊ အခြေခံပြည်သူတွေ၊ မတရားဖိနှိပ်ခံနေရသူတွေ၊ သူတို့တွေက သူတို့နိုင်သလောက်၊ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသလောက် လုပ်နေကြတယ်။ ပြောစရာရှိလာတာက နိုင်ငံရေးပါတီတွေနှင့် တတိယအင်အားစုလို့ခေါ်တဲ့ အစဉ်အလာရှ်ိခဲ့ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်း( ၈၈ ငြိမ်း/ပွင့် လိုမျိုးတွေ) ပေါ့။ တခါလာလည်း ပြည်သူတွေဦးဆောင်နေတာကို လာရောက်ပူးပေါင်းတာတို့၊ ဝန်းရံတာတို့ဘဲ လုပ်ကြတော့မှာလား။ ပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်း ဘယ်ပါတီမှ ပြည်သူ့ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ဦးဆောင်တာ မတွေ့ရဘူး။ ခိုင်မာတဲ့ ပါတီမူဝါဒတွေလည်း ချမပြနိုင်ကြသေးဘူး။ တချိန်က ပြည်သူ့ရှေ့က မားမားမတ်မတ် ဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလည်း သက္ကရာဇ်တွေပြောင်းသွားလို့၊ အသက်တွေ ကြီးသွားကြလို့ ခံယူချက်တွေ မှုန်ဝါးသွားကုန်ကြတာလား၊ မီးစာကုန် ဆီခန်းသွားကြတာလား ?
ဒီရေ၊ ဒီလှေ နှင့် ဒီလူတွေ ဘယ်ကမ်းမှာ ဘယ်အချိန်မှ သောင်တင်ရပါ့မလဲ ???
Oh Oh for me…I am not going to lead any one, as I am sure that NO one will follow me.
To follow some one…Notaparticularly effective leader seen so I am going to support any one who could lead ALL the Muslims of Myanmar.
In the mean time…I am supporting FEW leaders but the problem is I failed to persuade those leaders to work as A TEAM.
This entry was posted on December 28, 2014 at 10:45 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.